Prof Xiirey “Guddigu Farsamadu dhag jalaq uma siin doono eedeeymaha iyo hadalada ka soo yeeraya madaxweynaha, howlaheena waan wadaneynaa” – idalenews.com
La gudoomiyaha guddiga farsamada soo xulista xildhibaanada cusub ee Baarlalamanka Prof. C/llaahi Xiirey ayaa ka jawaabay eedeeyn shalay guddigaas uu dusha uga tuuray madaxweynaha xiligiisu dhamaaday ee Somalia Shiikh Shariif Axmed taasoo aheyd iney carqaladeynayaan nabada Somalia.
Prof. C/llaahi Xiirey ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha uu yahay mid gef ah oo meel uga dhacaya howlaha Qaran ee guddigooda ay wadaan wuxuuna xusay in eedeeyntaas ay tahay mid aan waxba ka jirin.
“Waan ka xunahay hadalka madaxweynaha ka soo yeeray meel cidlo ah ayuuna naga eedeeyey inuu sidaas u hadlana wax loo baahnaa ma aheyn eedeeymaha uu sheegeyna waa waxba kama jiraan, guddigan waxaa la siiyey waajibaad cayiman, kaas ayeyna gudanayaan” ayuu yiri Prof. C/llaahi Xiirey.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in guddigaas ay ka madax banaan yihiin dowlada KMG ah ayna si wadajir ah u magacaabeen saxiixeyaasha road-mabka, wuxuuna xusay in aysan dhag jalaq u siin doonin eedeeymaha iyo hadalada ka soo yeeraya madaxweynaha, howlahoodana nu wadan doonaan sidii loo talo galay.
“Waxaa nasiib darro ah in dad aqoonyahano ah oo loo xulay inay ka qeyb qaataan dib u shiska Soomaaliya ay awooddii la siiyay isticmaalaan mid ka badan, kana shaqeeyaan waxyaabo dadka Soomaaliyeed shaki iyo mugdi kala gelinaya aad ayaan uga xun nahay, nabaddaan dadna waa u dhintay dadna waa dhaawacmay, dadna habeen iyo maalin ayuu u soo jeeday, rag waqti kooban jooga inay fowdo abuuraan waa wax nasiib darro ah, dambi ka weynna ma jiro hannaanka dowladnimo in la carqaladeeyo” ayuu yiri madaxweynuhu oo hadaladaas ula jeeday guddiga farsamada soo xulida xildhibaanada.
Hadaladan ay is dhaaf sanayaan labada dhinac ayaa ku soo aadayaa xili weli ay xaniban yihiin rag u badan hogaamiye kooxeedyo hore oo ay xildhibaanimo u soo magacaabeen beelaha ay ka dhasheen ka dib markii ay dib u celiyeen guddiga farsamada oo sheegay in dembiyo lagu tuhunsan yahay, waxaana dib loo soo celiyey 25 xubin oo u badan rag ku dhow dhow madaxweynaha ka dib markii uu isagu dedaal u dheer u galay.
2da Shariif oo mar kale xulufo noqotey, Culeyskoodana isugu geeyey Cali Khalif Galeyr (Warbixin Xiiso leh)